दोलखा विशेष Archives - Page2of 86 - Awajonline Online Newspaper - Awajonline Online Newspaper
चरिकोट कारागारबाट ३ कैदीबन्दी भए जेलमुक्त
रवीन्द्र गौतम । दोलखा जेठ १५, चरिकोट । चरिकोट कारागारमा रहेका ३ जना पुरुष कैदीबन्दी जेलमुक्त भएका छन् । नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको १३ वर्ष पुगेको अवसरमा बिहिबार १३ औँ गणतन्त्र दिवस मनाउने क्रममा कैदीबन्दीको ५० प्रतिशत कैद मिनाहा गरिने व्यवस्था अनुरुप उनीहरु जेलमुक्त भएका हुन् । चरिकोट कारागारमा बन्दी जीवन विताईरहेका कालिञ्चोक गाउँपालिका–२ बाबरेका
लकडाउनमा दोलखा नामक फोटो कन्टेष्ट आयोजना
चैत २५, चरिकोट । विगत ८ बर्षदेखि दोलखामा सञ्चालनमा रहेको सामुदायिक रेडियो भीमेश्वर ९०.८ मेगाहर्जले लकडाउनमा दोलखा नामक फोटो कन्टेष्टको आयोजना गरेको छ । कोरोना भाईरस (कोभिड–१९)को सम्भावित संक्रमणको जोखिमबाट बच्न र बचाउन सरकारले आह्वान गरेको लकडाउनको अवधिमा दोलखामा भएगरेका असल अभ्यासहरुलाई समेट्ने गरी रेडियोले लकडाउनमा दोलखा फोटो कन्टेष्ट २०२० को आयोजना गरेको हो ।
सशस्त्र प्रहरी दिवसमा अनाथलाई सहयोग (फोटो फिचर)
दोलखा, माघ ९ सशस्त्र प्रहरी बल चरिकोट गुल्मले आफ्नो १९ औँ वार्षिक दिवसको अवसरमा गौरीशंकर बालगृहका बालबालिकालाई सहयोग गरेको छ । १९ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा बालगृहको प्राङ्गणमा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त शर्माले बालगृहमा आश्रित ३० जना बालबालिकाहरुलाई खाद्यान्न, खेलकुद सामग्री तथा स्टेसनरी वितरण गरेका हुन् । सशस्त्र प्रहरी बल चरिकोट गुल्मपति
कालिञ्चोक माविको ४९ औँ वर्षगाँठ : शिक्षा पत्रकारिता पुरस्कार पत्रकार गौतमलाई
दोलखा दोलखा जिल्लाको सदरमुकाम चरिकोट स्थित कालिञ्चोक माध्यमिक विद्यालयले ४९ औँ वर्षगाँठ मनाएको छ । विसं २०२८ मा स्थापना भएको बिद्यालयले आज ४९ औँ वार्षिक दिवस भव्य रुपमा मनाएको हो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि भीमेश्वर नगरपालिकाका मेयर भरतबहादुर केसीले समारोहको उद्घाटन गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा नगरले सबैभन्दा धेरै लगानी गरेको दाबी गरे । नगरपालिकाले दिवा खाजा,
दोलखा दोलखा जिल्ला सदरमुकाम चरिकोटस्थित कालिन्चोक माविमा अध्ययनरत ६ जना विद्यार्थीलाई सुजन–परिता एजुकेसन फाउण्डेसन अमेरिकाले छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ । कालिन्चोक माध्यमिक विद्यालय, चरिकोटबाट एसईई परीक्षामा उत्कृष्ट ग्रेड प्राप्त गर्ने ६ जना विद्यार्थीलाई फाउण्डेसनले छात्रवृत्ति प्रदान गरेको हो । ६ जनामध्ये सर्वोत्कृष्ट एक छात्रा र एक छात्रलाई ल्यापटप र जनही २५ हजार रुपैयाँ प्रदान गरिएको
नेपाल पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायी महासंघ दोलखाको साधारणसभा सम्पन्न
मंसिर २१, चरिकोट । नेपाल पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायी महासंघ दोलखाको १० औं बार्षिक साधारणसभा सम्पन्न चरिकोटमा सम्पन्न भएको छ । शाखाका अध्यक्ष नारायणबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षता एवम् नेपाल पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायी महासंघ ३ नं. प्रदेशका उपाध्यक्ष रमेश ढुंगेलको प्रमुख आतिथ्यतामा साधारणसभा सम्पन्न भएको हो । प्रमुख अतिथि ढुंगेलले पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायीहरु धरासायी बन्दै
कार्यक्रम हुँदै गर्दा नजिकै आगलागी, ३ घाइते……………….
दोलखा दोलखा सदरमुकाम चरिकोटमा एउटा कार्यक्रम भैरहेको थियो, अचानक केही मानिसहरु आगो लाग्यो भन्दै भागदौड गर्न थाले । कार्यक्रमस्थल नजिकै एउटा घरमा आगो लागेको थियो । स्थानीय बासिन्दाहरुमध्ये कोही आगो निभाउने प्रयास गर्दै थिए, कोही सुरक्षा निकायलाई खबर गर्दै थिए । केही बेरमै सुरक्षाकर्मीहरु आए । उनीहरुले घरबाट २ जनालाई गम्भीर घाइते र एक जनालाई